AirPods 3 oo aan arki doonno berri ma beddeli doono AirPods 2 | Waxaan ka imid mac
AirPods 3 oo aan arki doonno berri ma beddeli doono AirPods 2
Toni Cortes | 13/09/2021 22:00 | Xanta
Kuo wuxuu maalmo sheegayay in munaasabadda berri oo Talaado ah Tim Cook qaadan doono dhowr 3 AirPods. Ugu dambayntii Apple ayaa soo bandhigi doonta jiilka saddexaad ee AirPods ee la isla dhexmarayo. Laakiin hadda Kuuriyaanku wuxuu sii ballaarinayaa macluumaadka, isagoo sheegay in jiilkan cusub uusan beddeli doonin kii hore.
Wuxuu leeyahay, ugu yaraan in muddo ah, Apple wuxuu sii wadi doonaa iibinta AirPods 2 hadda oo ay weheliyaan AirPod -yada cusub 3. Waxa aan caddayn ayaa ah in shirkadu ay maanta hoos u dhigi doonto qiimihii kuwii hore, ama ay sii hayn doonto, sidaasna ay kuwa cusub uga qaalisan doonto. Berri waxaan ka tagi doonaa shaki.
Warbixin saxaafadeed uu daabacay falanqeeyaha Kuuriya Ming-Chi Kuo, midkani wuxuu xaqiijinayaa in Apple ay berri ku soo bandhigi doonto jiilka saddexaad jiilkeedii caanka ahaa ee AirPods. Illaa iyo hadda, ma jiraan wax cusub oo aan hore u ogeyn.
Waxyaabaha cusub ayaa ah in maanta ay sheegtay in Apple ay sii wadi doonto iibinta jiilka labaad AirPods marka kuwa cusub la bilaabo iibinta. Sidaa darteed wuxuu rumeysan yahay in tani ay muujineyso in AirPods 3 lagu iibinayo qiimo ka sarreeya kuwa hadda jira, ama 2 AirPods leeyihiin qiimo -dhimis haddii kuwa cusubi ay la jaanqaadaan qiimaha moodalka hadda leh ku -dallacaadda bilaa wireless.
Kuo ma garanayo waxa Apple samayn doonto, laakiin wuu sheegi lahaa. Waxa kaliya ee uu bartay ayaa ah in ugu yaraan in muddo ah, labada jiil ee AirPods ay wada noolaan doonaan iibka, kan labaad iyo kan saddexaad.
Falanqeeyaha Kuuriya ayaa sidoo kale saadaaliyay tirooyin wanaagsan aaladahaan. Kuo wuxuu rajaynayaa bilaabista AirPods 3 inay saameyn togan ku yeelato iibinta taleefoonnada gacanta ee wireless -ka ah ee Apple, isagoo saadaalinaya 10-15% iibka ayaa kordhay rubuca hore ee 2022.
Waqtigan xaadirka ah, ma jiro casriyeyn muddo-gaaban ah oo ku saabsan AirPods Pro. Waa hubaal in shirkadu durba ka shaqaynayso, laakiin waxay noqon doontaa sanadka soo socda. Hadda, berrito waxaan arki karnaa sida AirPods -kan cusub 3 u shaqeeyeen.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » AirPods 3 oo aan arki doonno berri ma beddeli doono AirPods 2
Apple TV + wuxuu helaa taxanaha "Yo Gabba Gabba" wuxuuna amraa qaybo cusub
Apple wuxuu sii daayaa macOS 11.6 oo leh hagaajin xagga amniga ah